Xaaladda Fanka Fanka
Sanadkii 2012-kii, Machadka McKnight wuxuu waydiistay Hawl-galinta Howlaha sida ay ula socon doonaan sannad-guurada barnaamijka Fellowship-ka. Shanai Matteson iyo Colin Kloecker oo ka socda Hawlaha Shaqada ayaa waxay rabeen in ay soo bandhigaan sheekooyinka adag iyo sheekada ee farshaxan-yahannada kuwan oo ay maanta yihiin, waxayna siiyaan aragtiyo kala duwan, hababka, iyo waayo-aragnimada ay farshaxannadu ku kulmayaan shaqadooda.
Christine Baeumler: bog Socda
Sidee loo soo saaraa farshaxanno dadweyne oo dhiirigeliya isbeddelka nidaamyada, miyaa dabiici ah ama dhisay, madani ama heerka dhaqanka shakhsi ahaaneed? Filin gaaban oo ku saabsan fanaaniinta deegaanka Minneapolis Christine Baeumler.
Bill Cottman: Qaab ciyaareedkii hore wuxuu sameymaa caqli cusub
Waa maxay geesinimada adoo raadinaya nolol macno leh oo adiga kuu eg? Filin gaaban oo ku saabsan fanaan ku saleysan Minneapolis Bill Cottman.
Brian Fink: Tani waa meel
Fududeeyaha Brian Frink waa caqabado waawayn oo ku saabsan waxa ka soo baxa, oo caado ahaan ahaan kala soocaya, nolosha miyiga iyo farshaxanka casriga ah.
Aditi Brennan Kapil: Dhegayso Lens
Maxay yihiin fikradaha iyo muraayadaha aan u keenno nolol maalmeedka nolosheena iyo sidee baa farshaxanku noogu caawin karaa in aan isku duba ridno kuwan? Filin gaaban oo ku saabsan Minneapolis oo ku salaysan kubbadda cagta, jilaha iyo agaasimaha Aditi Brennan Kapil.
Mankwe Ndosi: Hababka Maalinlaha ah
Wixii Mankwe Ndosi, farshaxanka ma aha wax la sameeyay oo kaliya istuudiyaha ama marxaladda, laakiin waxaa lagu darayaa maalin kasta. Waxay u aragtaa farshaxanka meel walba, oo had iyo goorba waxaa ku jira ficil abuur.
Carolyn Swiszxz: Mashruuca Naxariista Dabiiciga ah
Marka hababka dhaqameed ee aad shaqadaada u sii wadi lahayd joojinta dareenka, waxay ka caawineysaa in la helo wax aad dib ugu dhacdo. Filin gaaban oo ku saabsan fanaaniinta ku dhaqan St. Paul Carolyn Swiszcz.
Farshaxanada Dhexdhexaadinta: Mawduuca ahaa Air
Maxaa dhacaya markii afar farshaxan oo isku dhafan ay ku weydiiyaan "Maxaa dhacaya"?